induction billet kudziya muchina | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
induction billet kupisa mhepo
Kuenderera Mberi Billet Kuchengeta Moto neInduction
24h Inopfurikidza Billet Inopisa Moto ne Induction yemhangura / yendarira, aluminium, iron simbi zvisati zvaitika kupisa, kupisa, kupisa kupisa nekucheka, nezvimwewo.
Application:Billet Heating Furnace inonyanya kushandiswa kwezvinhu zvose zvesimbi kupisa usati wasvika, kubvongodza, kupisa, kupisa kupisa uye kucheka, uye kushandiswa kwesimbi zvinyoro uye kutengesa, kuvhara, kutengesa uye kumwe kurapwa kwehutano sezvakazara.
1. Inoshandisa yepamusoro yemagetsi wedunhu kudzora, iine pamusoro-voltage, pamusoro-pari zvino, kudzikamisa kumanikidza, ikozvino kutapudza, kushomeka kwechikamu, kushomeka, pasi pemvura kumanikidza, chikamu kutevedzana otomatiki kuzivikanwa, kutonhora kwemvura tembiricha alarm alarm uye zvimwe zvakawanda zvekudzivirira maficha. Simba chinhu otomatiki kugadzirisa basa. Kubva pamubhadharo unotonhora kusvika pakukanda mukati mekutenderera kwese zvisinei nekuti mamiriro emoto anoshanduka sei, gadzirisa otomatiki simba kuchoto, kuitira kuti huwandu hwakawanda hwesimbi yakanyungudutswa pa kilowatt, ipfupi rakafanana simba kupisa nguva, nekudaro ichiwedzera iyo purofiti yevagadziri, yakawedzera basa kubereka.
2.Control line yakatsaurirwa bhokisi rakasanganiswa uye yakanyanya kukonzera nzvimbo yakanyarara zvachose, chengetedza nzvimbo yekudzivirira yakachena uye inotonhorera. Kunyatsovandudza utongi hwehupenyu hwebhodi uye hutsika hwakavimbika.
3.High-power converter zvombo zvinoshandiswa kubva kune dzimwe nyika uye dzimba dzakanaka dzinozivikanwa nevhizha, uye dzinomhanya pa 50% yehuwandu hwezvakakosha, saka ne 100% kugadzirisa kuchengetedzwa kwezvinhu, zvichiwedzera huwandu hwehutano hwakavimbika.
4.Iye michina inoshandisa hombe mweya kutonhora mhangura, uchienzaniswa nemvura-yakatsiga mhangura, yakawanda simba rekudziya, kuwedzera kushanda, hakudi kuchengetedzwa
5.Power inotanga kushandisa zero voltage kutsvaira kutanga, hapana chinokanganisa, mune isina-mutoro, inorema mutoro, inotonhora simbi uye dzimwe nyika dzinogona kuvimbika kubva kune inesimba, yakagadzikana uye yakavimbika, isina matambudziko kwenguva yakareba uye inogonesa kuchengetedza.
1. Kunopisa nekukurumidza, kupisa kushambidzika kwehutano, kusapiswa kwehuniyasi, kushandiswa kwesimbi zvakafanana.
2. Inogona kupisa zvakananga kubva kuchitonhora zvinhu, zviri nyore kutsiva.
Kuchenesa nekukurumidza, kusanyanya kuvharidzirwa kwekushongedzerwa:
Sezvo chirevo chemasvikiro epakati induction heat iyo inokonzerwa nemagetsi emagetsi, kupisa kunogadzirwa ne workpiece pachayo, saka iyi inopisa inopisa inopisa inopisa, huniyidheti shoma shoma uye yakanyanya kupisa kushanda, nekudzoka kwakanaka kudzokorora.
Nhamba yepamusoro yezvigadziriswa, kunze kwekushanda zvakakwana zvinogona kuwanikwa:
Kuzvinyatsogadzirisa nekugadzirisa kushandiswa kwechigadziro chakasarudzwa chakasarudzwa, pamwe nesangano rekuzvitsaurira rakagadzirwa nekambani yedu, pasina kambani yekuvhiya inogona kuwanikwa.
Kuchenesa zvakafanana, kutenderera kwakanyanya kwekushanda kwakarurama:
Kuchenesa zvakafanana, iyo huru yekutengesa kwemafasi yemusiyano ishoma. Icho kutonhora kunogona kunyatsogadziriswa nehutano hwekutonga system.
Simple Induction Heating furna replacement:
Maererano nehukuru hwakasiyana hwebasa rekushanda, kuti ave nehutano hwakasiyana-siyana hwekutsvaira mukati mevira. Chivako chimwe nechimwe chakagadzirwa ne hydropower nokukurumidza shanduko yekubatanidza, kuitira kuti vira racho rive nyore, nekukurumidza uye rinogona kutora nzvimbo.
Zvombo zvekudzivirira zvachose:
Izvo zvizere zvezvigadzirwa nemvura yekushisa kwemvura, kushandiswa kwemvura, pamusoro pezvino, pamusoro pemhepo, kushaya kwekuchengetedzwa kwechikamu, uye nepamusoro pekushisa, kupera kwemagetsi alarm device. Nokudaro kuvimbika kwechokwadi kana iyo midziyo iri mumhosva, pasina kuora kwezvinhu.
Kushandiswa kwepasi mashoma, kusasvibiswa:
Yakakwira kupisa kupisa, ichienzaniswa nedzimwe nzira dzekupisa, ichideredza kushandiswa kwesimba zvinobudirira. Midziyo inoenderana nezvinodiwa nharaunda, hapana kusvibiswa. Muindasitiri yekugadzira, iko kushandiswa kwesimba kana kuchipisa kusvika 1250 ºC iri pasi pe 390 kwh / t.
Categories Technologies Tags aluminium billet heater, aluminium billet moto furnace, billet kupisa, billet kupisa zvombo, billet kupisa furna, billet kupisa mhepo, billet kupisa system, continous billet kupisa furnace, mhangura billet kupisa furnace, induction billet kupisa mhepo